I-A106grb isitokhwe somenzi wemibhobho yentsimbi engenamthungo
Umbhobho wensimbi unecandelo elingenanto kwaye ubude bawo bukhulu kakhulu kunobubanzi okanye umjikelezo wentsimbi. Ngokwemilo yecandelo, ihlukaniswe kwiibhobho zetsimbi ezijikelezayo, zesikwere, ezixande kunye nezikhethekileyo; Ngokwemathiriyeli, yahlulwe kumbhobho wensimbi ye-carbon structural, umbhobho wensimbi ophantsi we-alloy, umbhobho wensimbi ye-alloy kunye nombhobho wensimbi odibeneyo.
Umbhobho wensimbi unecandelo elingenanto kwaye ubude bawo bukhulu kakhulu kunobubanzi okanye umjikelezo wentsimbi. Ngokwemilo yecandelo, ihlukaniswe kwiibhobho zetsimbi ezijikelezayo, zesikwere, ezixande kunye nezikhethekileyo; Ngokwezinto eziphathekayo, yahlulwe kumbhobho wensimbi ye-carbon structural, i-alloy low structural steel pipe, i-alloy iron pipe kunye ne-composite steel pipe; Ikwahlulwe kwimibhobho yentsimbi yokuhambisa umbhobho, ubunjineli bobunjineli, izixhobo ezishushu, ishishini le-petrochemical, ukuveliswa koomatshini, ukugrumba i-geological, izixhobo zoxinzelelo oluphezulu, njl. Ngokwenkqubo yokuvelisa, yahlulwe ibe yipayipi yentsimbi engenamthungo kunye nombhobho wentsimbi odityanisiweyo. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wahlulwe waba kuqengqeleka ashushu kunye nokuqengqeleka okubandayo (umzobo), kwaye umbhobho wentsimbi odityanisiweyo wahlulwe waba ngumbhobho wentsimbi odityanisiweyo othe tye kunye nomthungo ojikelezayo wentsimbi.
Umbhobho wentsimbi awusetyenziselwa nje ukuhambisa ulwelo kunye nomgubo oqinileyo, ukutshintshisa amandla obushushu, ukuvelisa iinxalenye zoomatshini kunye nezikhongozeli, kodwa kunye nentsimbi yezoqoqosho. Ukusebenzisa umbhobho wentsimbi ukwenza igridi yesakhiwo sesakhiwo, intsika kunye nenkxaso yomatshini kunokunciphisa ubunzima, ukonga isinyithi ngama-20 ~ 40%, kunye nokuqonda ukwakhiwa kwemizi-mveliso kunye noomatshini. Ukuvelisa iibhulorho zeNdlela ePhakamileyo ezinemibhobho yentsimbi azikwazi nje ukugcina intsimbi kunye nokwenza lula ulwakhiwo, kodwa nokunciphisa kakhulu ummandla wokugquma okukhuselweyo kunye nokugcina iindleko zotyalo-mali kunye nokugcinwa kwazo.
Imibhobho yentsimbi inokwahlulwa ibe ngamacandelo amabini ngokweendlela zokuvelisa: imibhobho yentsimbi engenamthungo kunye nemibhobho yentsimbi edityanisiweyo. Imibhobho yentsimbi edityanisiweyo ibizwa ngokuba yimibhobho edityanisiweyo ngokufutshane.
1. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo unokwahlulwa ube ngumbhobho oshushu oqengqelekayo ongenamthungo, umbhobho otsalwa ngokubanda, umbhobho wentsimbi ochanekileyo, umbhobho owandisiweyo oshushu, umbhobho ojikelezayo obandayo kunye nombhobho okhutshiweyo ngokwendlela yokuvelisa.
Iinyanda zemibhobho yentsimbi
Umbhobho wensimbi ongenamthungo wenziwa nge-carbon steel high-quality okanye i-alloy steel, enokuthi ihlulwe ibe yi-hot rolling kunye ne-cold rolling (umzobo).
2.Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo wahlulwe waba ngumbhobho odityanisiweyo wesithando somlilo, i-welding yombane (i-resistance welding) umbhobho kunye nombhobho odibeneyo we-arc ozenzekelayo ngenxa yeenkqubo ezahlukeneyo ze-welding. Ngenxa yeendlela ezahlukeneyo zokuwelda, yahlulwe yaba ngumbhobho odityanisiweyo othe tye kunye nombhobho odityanisiweyo. Ngenxa yokuma kwayo kokuphela, yahlulwe kumbhobho odityanisiweyo wesetyhula kunye nohlobo olukhethekileyo (isikwere, isicaba, njl. njl.) umbhobho odityanisiweyo.
Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo wenziwe ngepleyiti yentsimbi esongiweyo edityaniswe ngokudityaniswa kwempundu okanye i-spiral seam. Ngokwemigaqo yokwenziwa kwendlela yokuvelisa, ikwahlulwe kumbhobho wentsimbi odityanisiweyo wokuhanjiswa kolwelo oluphantsi koxinzelelo, umbhobho wentsimbi ojikelezayo, umbhobho wentsimbi odityanisiweyo, umbhobho wentsimbi odityanisiweyo, njl njl. kumashishini ahlukeneyo. Imibhobho edibeneyo ingasetyenziselwa imibhobho yamanzi, iipayipi zegesi, iipayipi zokufudumeza, iipayipi zombane, njl.
Umbhobho wentsimbi unokwahlulwa ube ngumbhobho wekhabhoni, umbhobho wealloyi, umbhobho wentsimbi, njl njl ngokwezinto zombhobho (okt ibakala lensimbi).
Umbhobho wekhabhoni unokwahlulwa ube ngumbhobho wentsimbi oqhelekileyo wekhabhoni kunye nombhobho okumgangatho ophezulu wekhabhoni wesakhiwo.
Umbhobho we-alloy unokwahlulwa ube: umbhobho we-alloy ophantsi, umbhobho wesakhiwo se-alloy, umbhobho we-alloy ophezulu kunye nombhobho wamandla aphezulu. Umbhobho wokuthwala, ubushushu kunye ne-asidi yokumelana nombhobho ongenasici, i-alloy echanekileyo (efana ne-kovar alloy) umbhobho kunye nombhobho we-superalloy, njl.
Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo, okwaziwa ngokuba ngumbhobho odityanisiweyo, ngumbhobho wentsimbi odityaniswe ngepleyiti yentsimbi okanye umtya wentsimbi emva kokukrala. Umbhobho wensimbi odityanisiweyo uneenzuzo zenkqubo yokuvelisa elula, ukusebenza kakuhle kwemveliso, iintlobo ezininzi kunye neenkcukacha kunye notyalo-mali oluncinci lwezixhobo, kodwa amandla ayo ngokubanzi angaphantsi kunombhobho wensimbi ongenamthungo. Ukusukela ngeminyaka yoo-1930s, ngophuhliso olukhawulezileyo lomgangatho ophezulu wemveliso eqhubekayo yokuqengqeleka kunye nenkqubela phambili ye-welding kunye nokuhlola itekhnoloji, umgangatho we-weld uye waphuculwa ngokuqhubekayo, iintlobo kunye neenkcukacha zemibhobho yentsimbi edityanisiweyo ziye zanda, kunye nemibhobho yentsimbi engenamthungo iye yaphuculwa ngokuqhubekayo. yatshintshwa kwiindawo ezininzi nangakumbi. Imibhobho yentsimbi edityanisiweyo yohlulwe ibe ngumbhobho odityanisiweyo othe tye kunye nombhobho odityanisiweyo we-spiral ngokohlobo lwe-weld.
I-longitudinal welded pipe ineenzuzo zenkqubo yokuvelisa elula, ukusebenza kakuhle kwemveliso, ixabiso eliphantsi kunye nophuhliso olukhawulezayo. Amandla ombhobho odityanisiweyo we-spiral uphezulu ngokubanzi kunombhobho odityanisiweyo othe ngqo. Inokuvelisa umbhobho odityanisiweyo onedayamitha yombhobho omkhulu ongenanto emxinwa, kunye nombhobho odityanisiweyo onedayamitha yombhobho owahlukileyo ongenanto yobubanzi obufanayo. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nombhobho womthungo othe tye kunye nobude obufanayo, ubude be-weld bunyuka nge-30 ~ 100%, kwaye isantya sokuvelisa siphantsi. Ke ngoko, ukuwelda komthungo othe tye kusetyenziswa kakhulu kwimibhobho edityanisiweyo enobubanzi obuncinci, kwaye i-spiral welding isetyenziswa kakhulu kwimibhobho edityanisiweyo enobubanzi obukhulu.
Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo wokuhanjiswa kwamanzi oxinzelelo oluphantsi (GB / t3091-2008) ikwabizwa ngokuba ngumbhobho odityanisiweyo ngokubanzi, owaziwa ngokuba ngumbhobho omnyama. Ngumbhobho wentsimbi odityanisiweyo osetyenziselwa ukuhambisa amanzi, igesi, umoya, i-oyile, ukufudumeza umphunga kunye nolunye ulwelo olunoxinzelelo oluphantsi ngokubanzi kunye nezinye iinjongo. Ubunzima bodonga loxhumo lombhobho wensimbi luhlulwe kumbhobho wensimbi oqhelekileyo kunye nombhobho wensimbi oqiniweyo; Isiphelo sombhobho sahlulwe kumbhobho wentsimbi ongeyontambo (umbhobho ogudileyo) kunye nombhobho wentsimbi ophothiweyo. Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo wokuhanjiswa kwamanzi oxinzelelo oluphantsi awusetyenziswanga ngokuthe ngqo kuphela ukuhanjiswa kwamanzi, kodwa ikwasetyenziswa ngokubanzi njengombhobho wokuqala wombhobho wentsimbi odityanisiweyo wokuhanjiswa koxinzelelo oluphantsi.
1.Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo odityanisiweyo wokuhambisa ulwelo oluphantsi koxinzelelo (GB / t3091-2008) ikwabizwa ngokuba ngumbhobho wentsimbi odityanisiweyo, owaziwa ngokuba ngumbhobho omhlophe. Ngumbhobho wentsimbi osetyenziselwa ukuhambisa amanzi, igesi, ioyile yomoya, ukufudumeza umphunga, ukufudumeza amanzi kunye nolunye ulwelo oluphantsi loxinzelelo ngokubanzi okanye ezinye iinjongo. Ubukhulu bodonga loqhagamshelo lombhobho wentsimbi lwahlulwe kumbhobho oqhelekileyo wentsimbi kunye nombhobho ojiyileyo wentsimbi; Isiphelo sombhobho sahlulwe saba ngumbhobho wentsimbi engafakwanga umsonto kunye nombhobho wentsimbi oxutyiweyo. Ukucaciswa kombhobho wensimbi kubonakaliswe kwi-diameter ye-nominal (mm), okuyixabiso eliqikelelweyo le-diameter yangaphakathi. Kuyinto yesiko ukusebenzisa i-intshi, njenge-1 / 2, 3 / 4, 1, 2, njl.
2. Umkhono we-carbon steel wire eqhelekileyo (Yb / t5305-2006) ngumbhobho wentsimbi osetyenziselwa ukukhusela iingcingo kwiiprojekthi zofakelo lombane ezifana nezakhiwo zoshishino kunye nezakhiwo kunye nokufakelwa koomatshini kunye nezixhobo.
3.Umthungo othe ngqo wombane odityanisiweyo umbhobho wentsimbi (GB / t13793-2008) ngumbhobho wentsimbi ogama lakhe linxusene ngombhobho wentsimbi. Ukwakhiwa ngokubanzi, ngokuqhelekileyo kwahlulahlulwe kumbhobho wensimbi we-metric welded, i-welded thin-wall pipe, njl.
4.Umthungo weSpiral umthungo ontywilisiweyo wearc wentsimbi umbhobho (SY / t5037-2000) wokuhambisa ulwelo loxinzelelo ngumbhobho wentsimbi ojikelezayo osetyenziselwa ukuhanjiswa kolwelo, othatha icoil yomtya wentsimbi eshushu eqengqeleke njengombhobho ongenanto, uhlala ushushu ukwenza ukujiya kunye namacala amabini. ukuwelda kwe-arc emanzini. Umbhobho wentsimbi unamandla okunyamezela uxinzelelo kunye nokusebenza kakuhle kwe-welding. Emva kohlolo olungqongqo lwesayensi kunye novavanyo, kukhuselekile kwaye kuthembekile ukuyisebenzisa. Umbhobho wensimbi unobubanzi obukhulu kunye nokusebenza kakuhle kokuhanjiswa, kwaye unokugcina utyalo-mali ekubekeni imibhobho. Lo mbhobho usetyenziswa ikakhulu ukuthutha ioyile nerhasi yendalo.
5.Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo weSpiral-frequency high-frequency welded steel (SY / t5038-2000) yothutho loxinzelelo lolwelo ngumthungo ojikelezayo odityanisiweyo wombhobho wentsimbi wokuthuthwa koxinzelelo loxinzelelo, othatha icoil yentsimbi eshushu eqengqelekayo njengombhobho ongenanto, uhlala ushushu ukwenza ukujiya. kunye ne-high-frequency lap welding method. Umbhobho wentsimbi unamandla oxinzelelo olunamandla kunye neplastiki efanelekileyo, ekulungele ukuwelda kunye nokusebenza; Emva kokuhlolwa kunye neemvavanyo ezahlukeneyo ezingqongqo kunye nesayensi, imodeli yoncedo ineenzuzo zokusetyenziswa okukhuselekileyo nokuthembekileyo, ububanzi obukhulu bemibhobho yentsimbi, ukuhanjiswa okuphezulu, kunye nokugcina utyalo-mali ekubekweni kwemibhobho. Isetyenziselwa ikakhulu ukubeka imibhobho yokuthutha ioli, igesi yendalo, njl.
6. Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo we-spiral-frequency high-frequency welded yentsimbi kuthutho oluphantsi loxinzelelo oluphantsi jikelele (SY / t5039-2000) ithatha icoil yomtya wentsimbi eshushu eqengqelekayo njengombhobho ongenanto, uhlala ushushu ukubunjwa okujiyayo, kwaye isebenzisa indlela yokuwelda i-high-frequency lap ukuwelda i-spiral seam. umbhobho wentsimbi odityanisiweyo ophezulu-frequency ukwenzela ukuthuthwa kolwelo oluphantsi koxinzelelo oluphantsi.
7.Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo we-Spiral wemfumba (SY / t5768-2000) yenziwe ngentsimbi yomtya wentsimbi eshushu-eqengqelekayo njengombhobho ongenanto, odla ngokufudumala ukubunjwa kwe-spiral, kwaye yenziwe ngokudibanisa i-arc emacala amabini okanye i-high-frequency welding. Isetyenziselwa umbhobho wentsimbi kwimfumba yesiseko yesakhiwo sokwakha, i-wharf, ibhulorho njalo njalo.
Ngaphambili: Iityhubhu zesikwere ezilungiselelweyo ezineenkcukacha ezahlukeneyo
Okulandelayo: I-45 # umbhobho wensimbi unomgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi
I-alloy Boiler Tube
Umbhobho wokutshintsha ubushushu beBoiler
Umbhobho weSimbi weBoiler ongenamthungo
Umbhobho weBoiler Steel waBaswa ngamalahle
Umbhobho weNtsimbi yeBoiler yeShishini
Umbhobho wentsimbi ongenamthungo weBoiler
Umbhobho wentsimbi yeBoiler yomphunga
Uxinzelelo oluphezulu lombhobho wentsimbi umenzi w...
Iwaranti yomvelisi wetyhubhu yebhoyila yokwenene
I-S355j2h ingenamthungo yomenzi wemibhobho yentsimbi...
Ukwenziwa kwetyhubhu yebhoyila enoxinzelelo oluphezulu...